Universal Online TV | कसरी बन्ने पर्फेक्ट अभिभावक ? कसरी बन्ने पर्फेक्ट अभिभावक ?
कसरी बन्ने पर्फेक्ट अभिभावक ?
प्रकाशित मिती: ११ पुष २०७४, मंगलवार
बच्चाका सन्दर्भमा केहि भनाई प्रचलित छन् । जस्तो कि, बालबालिका भनेका काँचो माटो हुन् । हुने बिरुवाको चिल्लो पात ।
बालबालिका काँचो माटो नै हुन्, जो परिस्थिती र परिवेश अनुसार जस्तो पनि बन्न सक्छ । एउटा बच्चाको भविष्य उनको अभिभावकले दिने वातावरणमा निर्भर हुन्छ । जब बच्चाले अनुकुल वातावरण प्राप्त गर्छ, सही बाटो समात्छ । जब अनुकुल वातावरण पाउँदैन, बाटो बिराउँछ ।
जस/अपजस अभिभावकको नै हो । बच्चालाई हुर्काउने क्रममा अभिभावकले त्यस्ता त्रुटी गरिरहेका हुन्छन्, जसले बच्चालाई पथभ्रष्ट बन्न बाध्य तुल्याउँछ । बच्चा जन्माएपछि उनीहरुलाई कसरी स्यहारसुसार गर्ने, कस्तो शिक्षादिक्षा दिने, कस्तो संस्कार सिकाउने भन्ने कुरा अभिभावकको हातमा हुन्छ ।
यो अवस्था खासगरी शहरिय परिवारमा पाइन्छ । पति-पत्नी दुबै व्यस्त । बच्चालाई अरुकै जिम्ममा छाड्ने वा चाइल्ड केयर सेन्टरमा राख्ने । कतिले त बच्चा हुर्काउने झन्झटबाट पार पाउन उनीहरुलाई होस्टलमा राखिदिन्छन् । अहिले यस्तो प्रवृत्ति निकै मौलाएको छ ।
बच्चा त्यही बेला आफ्नो अभिभावकसँग विमुख हुन पुग्छन्, जतिबेला उनीहरुलाई आमाबुवाको ममतामयी काखको खाँचो हुन्छ । न्यानो स्पर्शको आवश्यक्ता हुन्छ । प्रेममय छातीको तलतल हुन्छ ।
अभिभावकले बच्चाको यो अवस्था बुझ्दैनन् । त्यही कारण बच्चाहरुले अभिभावकत्व गुमाउन पुग्छन् । बच्चालाई उचित रेखदेख, हेरचाहको आवश्यक भएको बेला उनीहरुबाट विमुख हुनु भनेको पक्कैपनि राम्रो होइन ।
अहिले के ट्रेन्ड छ भने, एउटा मात्र बच्चा जन्माउने । हामीकहाँ सन्देश नै छ, थोरै सन्तान, इश्वरको वरदान । बच्चालाई बोझको रुपमा लिने वा अभिभावकको हैसियत कमजोर भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो सन्देश जारी गरिएको हो । तर, यसले बच्चाहरु एक्लिदै गएका छन् । एउटा दम्पतीले एउटा मात्र बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा बच्चाले आफ्नो साथी पाउँदैनन् । आफु जस्तै दौतरी पाउँदैनन् । यसरी उनीहरु एक्लिदै गएका छन् ।
कसरी हुर्काउने ?
बच्चाका लागि अभिभावकले साथीको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । उनीहरुसँग बातचित गर्ने, खेल्ने, हाँस्ने, कार्टुन हेर्ने, रमाउने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बच्चाहरु अभिभावकसँग घुलमिल हुन्छन् । उनीहरुले एक्लो अनुवभ गर्दैनन् ।
अक्सर अभिभावक के ठान्छन् भने बच्चासँग कुराकानी गर्नु आवश्यक छैन । बच्चाहरु आफै खेलिहाल्छ । तर, बच्चासँग कुराकानी गर्ने, उनीहरुको भावना बुझ्ने, इच्छा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हुनसक्छ, उनीहरु आफुलाई खुलस्त रुपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन् । यद्यपी केहि कुरा गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यसका लागि अभिभावकले उनीहरुसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ ।
बच्चाको क्षमता चिनौं